Kuyini ukukhokhwa kwe-Allstate SIPP? | XperimentalHamid
Uyitholile idiphozithi enencazelo yenkokhelo ye-Allstate SIPP? izindaba ezimnandi uhlelo lokukhokha olwethulwe ngu-Allstate. Sizoxoxa nge “Ukukhokhwa kwe-Allstate sipp”Ngokuningiliziwe kulesi sihloko.
Izindaba Ezinhle: Uhola ku-Allstates ngohlelo lwawo lokukhokha lwe-SIPP
Yini i-SIPP ka-Allstate?
Ngabe uzokhokhelwa kuma-Allstates ngokukhokha kwe-sipp?
Ngabe luyini ngempela uhlelo lokukhokha lwe-SIPP olwethulwe yi-Allstates?
I-SIPP isifinyezo sika IShelter-in-Indawo Payback.
Njengoba abantu abancane bezishayela ngenxa ye-covid 19 kuzoba nezingozi ezimbalwa yingakho ukwethulwa kwezindawo zonke ukukhokha kwe-sipp.
I-allstate SIPP yokukhokha
YEBO. Nasi isitatimende esisemthethweni esivela ku-Allstate maqondana nohlelo lokukhokha.
Ukushayela okuncane = izingozi ezimbalwa.
Ngakho-ke sidale i-Shelter-in-Place Payback: uhlelo lokubuyisa ngaphezulu kwe- $ 600 yezigidi kumakhasimende ezithuthi e-Allstate.
Lokhu kusho uma unediphozithi kuma-akhawunti akho ngohlelo lokukhokha lwe-SIPP.
YENZA ezinye izindaba ezinhle: Abemukeli bezokuphepha komphakathi bazokhokhelwa ngokuzenzakalelayo
Ama-oda we-Shelter-in-place asho abantu abambalwa emigwaqweni nezingozi ezimbalwa. Ngokuncipha kwalokhu kwehla, amakhasimende omshuwalense wezimoto azothola ama-15% ukubuyiselwa, ngokuya ngamaphrimiyamu abo anyanga zonke ngo-Ephreli noMeyi.
U-Allstate uzofaka imali ngokuzenzakalelayo ebhange noma ekhadini lesikweletu kwifayela, afake isicelo sesikweletu esitatimendeni sakho esilandelayo, noma akukhokhele isheke, ngokuya ngokuthanda kwakho. Sicela ubheke imininingwane yakho yokukhokha ukuze uqiniseke ukuthi isesikhathini.
Ukukhokhelwa kweShelter-in-Place Payback kuzokwenzeka phakathi nezinyanga zikaMeyi noJuni kumakhasimende ethu womshuwalense wezimoto.
Amakhasimende angathola izinkokhelo ngokushesha futhi abuke imininingwane yokukhokha ngo-Ephreli ku-Allstate Mobile App. Njengesikhumbuzo, imininingwane yokukhokha akufanele inikezwe amaqembu angaphandle.
Indoda Yami Yafudumala Umbhede Isahluko 71 - 85 samahhala online
Abazokuthola Kwezokuphepha Komphakathi Bangayithola Nini I-Stimulus?